#ShutDownZim: Hiteraka Fananganana ‘Rindrin’Afo Lehibe’ Ve ny Fihetsiketsehana Ao Amin’ny Media Sosialy Ao Zimbaboe? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2016 11:48 GMT
Sarin'ny tanàndehibe ao Harare, babangoana tamin'ny 6 Jolay. Nozarain'ny @Lean3JvV tao amin'ny Twitter.
Iray amin'ireo lehibe indrindra sy mahomby indrindra tao anatin'ny taona vitsivitsy ny “fikatonana” manerana ny firenena tao Zimbaboe – fitsipahana ny asa, ny fiantsenana sy ny andrim-panjakana. Namela ny lalana, ny magazay, ny banky sy ny fivarotana ho babangoana tao an-tanànan'i Harare renivohitra izany.
Mitaky ny fandraisan'andraikitry ny governemanta manoloana ireo karama tsy voaloa, ny kolikoly ary ny tsy fahampian'ny asa ireo mpanao fihetsiketsehana satria eo mikoroso fahana ny toekaren'i Zimbaboe. Tao anatin'ny krizy ara-bola ny firenena nanomboka ny taona 2009 ary tombanana ho 80 na 90 isanjato ny tahan'ny tsy fananan'asa. Tsy mbola nahazo karama ireo mpiasam-panjakana ao Zimbaboe nanomboka tamin'ny volana Jiona tamin'ity taona ity, kanefa mahazo karama ara-potoana foana kosa ireo mpitandro ny filaminana noho ny governemanta miaina ny tahotry ny fanonganana ara-politika mahery setra.
Marobe ihany koa ireo mitaky ny fialàn'ny filoha Zimbaboeana Robert Mugabe , izay teo amin'ny fahefana hatramin'ny taona 1980, raha nahazo ny fahaleovantenany tanteraka avy amin'ny Fanjakana Mitambatra ny firenena.
Tsy vao voalohany i Zimbaboe no nikarakara “fikatonana” noho ny tsy fahombiazan'ny governemanta, saingy sambany kosa ireo antoko politika sy fikambanana sivily no nanao fihetsiketsehana amin'ny fampiasana media sosialy.
Tao amin'ny Twitter, Facebook sy ny fandefasan-kafatra ara-tsosialy toy ny WhatsApp, nampiasa tenirohy isan-karazany toy ny #ShutDownZim, #ZimbabweShutdown, #ThisFlag, #‎ShutDownZimbabwe2016‬ sy ny #ZimShutDown ireo mpikatroka mba hikarakara fikatonana.
Pikantsary #ThisFlag tao amin'ny lahatsary Youtube ahitana ny pasitera Zimbaboeana Evan Mawarire, izay nanomboka ny iray amin'ireo tenirohy fanalahidy mikarakara ny fanoherana ny filoha Robert Mugabe
Nanjary fitaovana manokana mahery vaika hanoherana ny fitondran'i Mugabe sy ny antokony ZANU-PF ny tenirohy #ThisFlag rehefa natombok'ilay pasitera tia tanindrazana manohitra ny kolikoly Evan Mawarire, amin'ny sary etsy ambony, tamin'ny 19 aprily, ampitson'ny Fetin'ny fahaleovantenan'i Zimbaboe izany.
Nanomboka tamin'ny volana Aprily 2016, niha-nanjary fitaovana matanjaka indrindra ho an'ny fikatrohana ara-politika tsy manohana antoko politika ao amin'ny aterineto ao amin'ny firenena ny sehatra media sosialy. Niteraka tahotra izany ka mahatonga ny governemanta handràra ny sehatra media sosialy atsy aoriana kely. Mampiseho ny fikatonana tamin'ny Alarobia teo fa rariny raha miahiahy ny olom-pirenena.
Ny marainan'ny fikatonana 6 Jolay, tsy azo nidirana ny WhatsApp. Tsy hoe tsy misy dikany izany- nitatitra ny loharanom-baovao ao an-toerana fa mandrafitra ny 34% n'ny lahatahiry aterineto ao Zimbaboe ny WhatsApp. Mandà ho tsy nanakatona izany ny governemanta, saingy tsy matoky izany ireo mpiserasera marobe.
Namoaka fampitandremana ihany koa ny Manampahefana Mpandamina ny Paositra sy ny Fifandraisandavitra ao Zimbaboe (POTRAZ) tamin'ny herinandro lasa izay nanasongadina sazy ho an'izay “hafatra hita fa manakorontana na manafintohina amin'ny fifandraisandavitra”:
Efa nampitandrina ny daholobe izahay fa manomboka ny vaninandro nivoahan'ity filazana ity, dia hosamborina sy hojerena manokana araka ny tombontsoam-pirenena izay olona rehetra tratra nahitana, na niaviana, nizara na nandefa hafatra manakorontana na manafintohina amin'ny fifandraisandavitra, anisan'izany ny WhatsApp na ny hafatra amin'ny media sosialy hafa izay azo heverina fa mahatonga fahakiviana, mitarika herisetra, mandrahona ny olom-pirenena sy miteraka korontana.
Nilatsaka taorian'ny fanambarana nataon'i Mugabe tamin'ny volana Aprily ny fampitandremana, raha nanonona azy ny haino aman-jery fa nilaza izy hoe tokony hianatra ny ataon'i Shina i Zimbaboe mba hanatsahatra ny “fanararaotana” amin'ny aterineto.
Na dia eo aza ny tsy fandehanan'ny WhatsApp amin'ny tambajotram-bahoaka, mbola afaka mizara vaovao amin'ny fampiasana tambajotra virtoaly manokana (VPNs) ny mpiserasera.
Eo anivon'ny foto-drafitrasan'ny aterineto, nandeha ny tsaho fa eo am-pikarakarana amin'ny fanomezana lisansa vavahadin-tserasera ho an'ny firenena ny governemanta, izay mety hotantanin'ny governemanta ary mety hitelina ireo vavahadin-tserasera maro miasa ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny dika mitovy amin'ny Politikan'ny Teknolojiam-baovao sy Fifandraisana ao amin'ny Firenena dia maneho mazava ny tanjon'ny governemanta amin'ny fametrahana foto-drafitrasa tokana ampiasain'ny mpamatsy tolotra aterineto rehetra sy ny ary hosina iray (backbone) an'ny firenena ahafahan'ny manampahefanan'ny governemanta hiditra malalaka amin'ny fifamoivoizan'ny tambajotra, ary azo inoana koa fa amin'ny lahatahirim-pifandraisan'ny mpiserasera.
Raha mbola hitohy ny fihetsiketsehana, dia hihamaro ny olom-pirenena mila mahay teknolojia satria mikasa hanenjana ny lalàna sy ny rafitra ara-teknika mifehy ny zavatra atao antserasera ny governermanta.